इस्लाममा पोशाक – Islam Guide
फ्रेवुअरी 3, 2018 Comments
(तपाईंको पोशाक) فهد بن سالم باهمام द्वारा
आस्थावानको पोशाक सुन्दर तथा सफा-सुग्घर हुनुपर्छ। विशेष गरी सलाह पढ्न र मानिसहरुसँग भेटघाट गर्नको लागि। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “हे आदमका सन्तान हो ! हरेक सलाहको लागि राम्रो वस्त्र धारण गर।” (श्रोत- सूरह अल्-आ’राफ : ७/३१)
अल्लाहले मानिसलाई राम्रो पोशाक लगाएर सुन्दर हुन प्रेरणा दिनु भएको छ, ’cause यसमा अल्लाहको वरदानको कृतज्ञता व्यक्त हुन्छ। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “हे सन्देष्टा हो, सोध ! अल्लाहले प्रदान गर्नु भएको वस्त्र र पवित्र रोजीलाई कसले अवैध गर्यो ? भनिदेऊ, यी आस्थावानहरुका लागि सांसारिक जीवनमा पनि छन् र अन्तिम दिनमा पनि उनीहरूकै लागि हुने छन्। हामी ज्ञानीहरूका लागि यसरी नै आफ्ना निशानीहरु प्रष्ट पार्छौं।” (श्रोत- सूरह अल्-आ’राफ : ७/३२)
पोशाकले मानिसका धेरै आवश्यकताहरु पूरा गर्दछ। .
पोशाकले निम्न आवश्यकताहरु पूरा गर्दछ-
१) मानिसका गुप्ताङ्गहरुलाई अरु व्यक्तिहरुको नजरबाट छोप्छ, ’cause मानिसमा प्राकृतिक रुपमा लाज हुन्छ। अल्लाहले भन्नु भएको छ- “हे आदमका सन्तान हो ! हामीले तिमीहरुका लागि पोशाक अवतरण गरेका छौं। जसले तिमीहरु आफ्ना अङ्गहरुलाई छोप्दछौ।” (श्रोत- सूरह अल्-आ’राफ : ७/२६)
२) मानिसको शरीरलाई जाडो, गर्मी र शारीरिक दु:खबाट बचाउँदछ। जाडो र गर्मी मौसमको परिवर्तनले भइरहन्छ तथा त्यसको नराम्रो प्रभाव मानिसले भोग्नु पर्छ। अल्लाहले भन्नु भएको छ- “उहाँले तिमीहरुका लागि यस्ता वस्त्रहरु बनाउनु भएको छ, जुन तिमीहरुलाई मौसमको चिसो, तातो र शत्रुको प्रहारबाट सुरक्षित राख्छन्। यसरी अल्लाह आफ्नो वरदान तिमीहरुका लागि पूरा गर्नुहुन्छ, ताकि तिमीहरु अल्लाहको लागि पूर्ण समर्पण गर।” (श्रोत- सूरह अन्-नहल : १६/८१)
इस्लाम प्राकृतिक धर्म हो। त्यसैले मानिसको व्यवहारिक जीवनमा ती नियमहरु मात्र लागू गरेको छ, जुन स्वच्छ प्राकृतिक नियम, सरल बुद्धि र साधारण विवेकसित पूर्णरुपले मेल खान्छ।
पोशाक र सिङ्गारको असल आधार वैध हो-
इस्लामले मुस्लिमहरुका लागि कुनै खास किसिमको पोशाकलाई अनिवार्य गरेको छैन। बरु जुनसुकै पोशाकले उद्देश्यलाई पूरा गर्छ र इस्लामि मान-मर्यादा विपरित छैन भने त्यो नै मुस्लिमको पोशाक हो।
रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले आफ्नो युगमा रहेका पोशाकहरु लगाउनु भयो र उहाँले न त कुनै खास पोशाक लगाउन आदेश दिनु भयो, न कुनै पोशकबाट मनाही गर्नु भयो, बरु पोशाकमा पाइने नराम्रा कुराहरूबाट रोक्नु भयो। ’cause व्यवहारमा असल कुरा जायज छ र पोशाक पनि त्यसैमध्ये पर्छ जसलाई बिना प्रमाण अवैध भन्नु मिल्दैन। तर यसको विपरित ईबादतमा असल कुरा अवैध हो, प्रमाणित नहुन्जेल कुनै पनि उपासना गर्नु हुँदैन।
रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले भन्नु भएको छ… “खाऊ, दान देऊ तथा राम्रो वस्त्र धारण गर तर त्यसमा घमण्ड र अनावश्यक खर्च नगर।” (श्रोत- निसाई : २५५९)
वर्ग: तपाईंको पोशाक